Abaalmarinta Nabadda ee Nobel Peace Prize 2019 oo ku guuleystay R/Wasaaraha Itoobiya Abiy… – Hagaag.com
Abaalmarinta Nabadda ee Nobel Peace Prize 2019 oo ku guuleystay R/Wasaaraha Itoobiya Abiy…
Posted on 11 Oktoobar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Guddiga Nobel-ka Norway waxay go’aansadeen inay abaalmarinta Nabadda ee Nobel peace prize ee sannadka 2019 siiyaan Ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali dadaalladiisa ku aaddan nabada iyo iskaashiga caalamiga ah, iyo gaar ahaan dadaalkiisa go’aaminta lahaa ee lagu xallinayey khilaafka xadka ee uu la lahaa dalka deriska la ah ee Eritrea. Abaalmarinta ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu aqoonsado dhammaan daneeyayaasha ka shaqeeya nabadda iyo dib-u-heshiisiinta Itoobiya iyo gobollada Bariga iyo Waqooyi-bari ee Afrika.
Markii uu Abiy Axmed noqday Rai’sul Wasaaraha bishii April 2018, wuxuu cadeeyay inuu jeclaan lahaa inuu dib u bilaabo wadahadaladii nabada ee Eritrea. Isaga oo iskaashi dhow la yeeshay Isaias Afwerki Madaxweynaha Eritrea, Abiy Ahmed wuxuu si dhakhso leh uga shaqeeyey mabaadii’da heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo muddadii dheereyd ee “nabad ma jirto, dagaal ma jiro” ee u dhexeeyay labada dal. Mabaadii’daas waxaa lagu dejiyay bayaan ay Raiisul Wasaare Abiy iyo Madaxweyne Afwerki ku kala saxiixdeen Asmara iyo Jeddah bilihii July iyo September. Muuqaal muhiim u ah kala-guurka ayaa ahaa Abiy Ahmed rabitaankiisa shuruud la’aanta ah ee ahaa inuu aqbalo go’aanka dhexdhexaadinta ee guddiga xuduudaha caalamiga ah 2002.
Nabadda kama soo baxdo ficillada hal xisbi kaligiis. Markii Rai’isul wasaare Abiy gacantiisii ​​soo gaadhay, Madaxweyne Afwerki wuu qaatay, wuxuuna gacan ka gaystey qaabaynta geedi socodka nabada ee labada dal. Guddiga Nobel-ka ee Norway waxay rajeynayaan in heshiiska nabadeed uu gacan ka geysan doono isbadal wanaagsan oo ku yimaada dhammaan dadka Itoobiya iyo Eritrea.
Gudaha Itoobiya, xitaa haddii shaqooyin badan ay sii jiraan, Abiy Ahmed wuxuu bilaabay isbadallo muhiim ah oo muwaadiniin badan rajo u siinaya nolol wanaagsan iyo mustaqbal ifaya. Wuxuu ku qaatay 100-kii maalmood ee ugu horreeyay isagoo Rai’isul Wasaara ah kor uga qaaday xaaladdii degdegga aheyd ee dalka saarneyd, cafisna u fidiyay kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah, joojinta faafreebka saxaafadda, sharciyeynta kooxaha mucaaradka ah, shaqada ka joojiyey millatariga iyo hoggaamiyeyaasha rayidka ah ee looga shakiyay musuqmaasuq, wuxuuna si weyn u kordhiyay saameynta Haweenka siyaasada Itoobiya iyo nolosha bulshada. Wuxuu sidoo kale ballan qaaday inuu xoojin doono dimoqraadiyadda isagoo qabanaya doorashooyin xor iyo xalaal ah.
Ka dib geedi socodkii nabada ee Eritrea, R/wasaare Abiy wuxuu ku hawlanaa howlaha kale ee nabada iyo dib u heshiisiinta ee Bariga iyo Waqooyi Bari Afrika. Bishii Sebtember 2018 isaga iyo dowladiisu waxay si firfircoon uga qayb qaateen caadi ahaanshaha xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Eritrea iyo Jabuuti ka dib sannado badan oo cadaawad siyaasadeed ka dhaxeysay. Intaa waxaa dheer, Abiy Ahmed wuxuu doonayey inuu dhexdhexaadiyo Kenya iyo Somalia khilaafkooda muddada dheer ka taagnaa ee ku saabsan xuquuqda aagga muranka ka taagan yahay ee badda. Waxaa hada rajo laga qabaa xalinta khilaafkan. Sudan, nidaamka militariga iyo mucaaradka ayaa ku soo noqday miiska wadahadalka 17-kii Agoosto, waxay soo saareen qabyo-qoraal wadajir ah oo dastuur cusub oo loogu tala galay in lagu xaqiijiyo kala-guur nabad ah oo ku yimaada xukunka shacabka ee dalka. Rai’isul wasaare Abiy wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray howsha keentay heshiiska.
Itoobiya waa waddan luqado kala duwan iyo dadyow kala duwan ay ku kala nool yihiin. Muddooyinkii dambe, tartanno qowmiyadeed oo hore ayaa soo shaac baxay. Sida laga soo xigtay goobjoogeyaasha caalamiga ah, illaa saddex milyan oo Itoobiyaan ah ayaa laga yaabaa inay gudaha ku barakacaan. Taasi waxaa dheer ka sokow malyan qaxooti ama magangalyo-doon ka yimid wadamada deriska ah. Rai’isul wasaare, Abiy Ahmed wuxuu raadinayay inuu horumariyo dib u heshiisiinta, wadajirka iyo cadaalada bulshada. Sikastaba, caqabado badan ayaan wali aan la xalin. Dagaallada qabaa’ilku way sii kordhayaan, oo waxaan aragnay tusaalayaal dhibaatadan toddobaadyadii iyo bilooyinkii la soo dhaafay. Shaki iigama jiro in dadka qaarkii u malayn doonaan in abaalmarinta sanadkan la bixinayo xilli hore. Guddiga Nobel ee Norway waxay aaminsan yihiin inay hadda tahay in dadaalka Abiy Ahmed uu mudan yahay aqoonsi isla markaana u baahan yahay dhiirri gelin.
Guddiga Nobel ee Norway wuxuu rajeynayaa in abaalmarinta Nabadda ee Nobel ay ku xoojin doonto Rai’isul wasaare Abiy shaqadiisa muhiimka ah ee nabada iyo dib u heshiisiinta. Itoobiya waa dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika waxayna leedahay dhaqaalaha ugu weyn Bariga Afrika. Itoobiya oo nabad ah, xasilloon oo guulo leh ayaa yeelan doonta cawaaqib fiican dhinacyo badan leh, waxayna gacan ka geysan doontaa xoojinta wadajirka u dhexeeya waddamada iyo dadka ku nool gobolka. Iyada oo la raacayo qodobbada Alfred Nobel ayaan maskaxda ku hayn doona, guddiga Nobel ee Norway wuxuu u arkaa Abiy Ahmed qofkii sannadkan kii ka horreeyay sameeyey waxyaabo badan oo u qalma abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee sannadka 2019.
About Admin (10566 Articles)